KPR uMbutho wabalimi beGadi - Imbewu ne zityalo ziyathengiswa
KPR yaqala ukusebenza ngokusesikweni ngo 2000 eSlovakia e Yurophu; kodwa ukuthumela imbewu nezityalo kumazwe omhlaba ngo1998
Eyona njongo yethu kukuba sihlangane nabalimi begadi kwilizwe lonke jikelele bemihlaba yemiqweno yonke ukuze sakhe uvimba omkhulu wembewu nezityalo (iBhanki yeKPR yeMbewu neZityalo) kwilizwe jikelele.
Okwangoku, sine 6 ezizona zingamasebe e (Silovakiya, Czechia, Ostreliya, Indiya, Thayilendi, Mzantsi Afrika ne Tanzaniya) nangaphezu kwa 200 yabaqokeleli bembewu kulo lonke ilizwe.
Kwezintsuku siyakwazi ukuqokelela nokunikezela ngaphezu kwa 10 000 entlobo zezityalo ezivela kwilizwe lonke.
Xa ngaba ukhangela nantonina eyenye into, ufike kwindawo elungileyo! Noko asikabi nayo yonke into esisityalo kuvimba wethu okwangoku, kodwa siyanda imihla ngemihla, unyawo ngoyawo, imbewu nembewu, isityalo nesityalo. Sikholelwa ukuba kungekudala sizakukwazi ukunikezela (ampuri) ngento yonke!
Kuthengiswa ngaphezu kwe - 10 000 yembewu nezityalo ezivela kumhlaba wonke - palms, cycads, exotic namatyholo akwazi ukumelana neqabaka nemithi, succulents, carnivorous, annuals, perennials, ornamental grasses, imifuno, etc.
Copyright © 1998-2020 KPR uMbutho wabalimi beGadi
Last changed 21.1.2020